ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ « MMWeather Information BLOG
« တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် »
Typhoon HALONG (JOSE) has moved north-northeast during the past 12 hours as it weakened further while over the northeastern part of the Philippine Sea…expected to move out of the Philippine Area of Responsibility (PAR) Thursday morning.
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက် အာရေဗျပင်လယ်တွင် မုတ်သုံလေအား အလွန်ကောင်းလျှက်ရှိပြီး(100 km/h) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင်လည်း မုတ်သုံလေ အားကောင်းလျှက် ရှိနေဆဲ(over 50 km/h) ဖြစ်ပါသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းလွန်တွင် ဒေသခံ ရေလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ဆက်သွယ် ပြောကြားချက်များအရ ပင်လယ်ပြင်တွင် ရေမျက်နှာပြင်အောက်မှ လှိုင်း(ဒေသအခေါ် လှိုင်းပုန်း(သို့မဟုတ် လွန်းပုန်း) ၂ ပေခန့် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဤကဲ့သို့ ပင်လယ်ပြင်၌ လွန်းပုန်း ဖြစ်ပေါ်လျှင် ထူးခြားဖြစ်စဉ်တစ်ခုခု ရှိနိုင်ကြောင်း၊ မည်သည့် ထူးထူးခြားဖြစ်စဉ် ဖြစ်နိုင်မည်ကိုတော့ မသိကြောင်း ကြားသိရပါသဖြင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်အတွက် Marine Weather Forecast(BUOY Weather)ခန့်မှန်းချက်အား အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမည်။
Marine Forecast for 15º N / 96º E
Wednesday 8/6 သြဂုတ်လ ၆ ရက်
Seas: SW 2.4 to 3.1 meters at7seconds. (အနောက်တောင်ဘက်မှ လှိုင်းအမြင့် ၂.၄ မီတာမှ – ၃.၁ မီတာ – ၇ စက္ကန့်လျှင် တစ်လုံးနှုန်း)
Winds: WSW 18 to 25 knots. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ တစ်နာရီ မိုင် ၂ဝ မှ မိုင် ၃ဝ ခန့်)
Seas: WSW 2.9 to 3.8 meters at7seconds. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ လှိုင်းအမြင့် ၂.၉ မီတာမှ – ၃.၈ မီတာ – ၇ စက္ကန့်လျှင် တစ်လုံးနှုန်း)
Winds: WSW 20 to 28 knots. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ တစ်နာရီ ၂၃ မိုင် မှ ၃၃ မိုင် ခန့်)
Thursday 8/7 သြဂုတ်လ ၇ ရက်
Seas: WSW 2.7 to 3.5 meters at 8 seconds. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ လှိုင်းအမြင့် ၂.၇ မီတာမှ – ၃.၅ မီတာ – ၈ စက္ကန့်လျှင် တစ်လုံးနှုန်း)
Winds: WSW 15 to 20 knots. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ တစ်နာရီ ၁၇ မိုင် မှ ၂၃ မိုင် ခန့်)
Seas: WSW 2.5 to 3.3 meters at 8 seconds. (အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်မှ လှိုင်းအမြင့် ၂.၅ မီတာမှ – ၃.၃ မီတာ – ၈ စက္ကန့်လျှင် တစ်လုံးနှုန်း)
Winds: W 17 to 22 knots. (အနောက်ဘက်မှ တစ်နာရီ ၂ဝ မိုင် မှ ၂၅ မိုင် ခန့်)
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း HALONG နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေ +6hr ကြိုတင်ခန့်မှန်း
MODEL-FORECAST, မိုးလေဝသအခြေအနေ, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 11W, HALONG, JOSE, ကပ္ပလီပင်လယ်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် »
« တောင်တရုတ်ပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်(ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်)မှ မုန်တိုင်းများနှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum